Mpụga igwe eji akwa akwa nke China akwa akwa akwa akwa na ndị na-emepụta | Ruisheng
Ebe nke Si: Jiangsu, China Brand Aha: OEM
Nọmba nlereanya: Ski jaket Akara: Nabata Ahịa Ahịa OEM
Ọha size Otu ọ bụla dị na agba: Achọrọ ndị chọrọ
Ọkwa: Grade Ihe ihe: Polyester / hazie, ihe achọrọ
Ndị ọgbọ: Styledị ndị okenye: Jaketị, jaketị windof na-efe efe
Njirimara: Anti-UV, Breathable, QUICK DRY, Ọrụ ikuku nke ikuku: ikuku mmiri, ikuku nke ikuku.
Ọnụ ego dị ala: Nnukwu nha nke na-akwụ ụgwọ
1 ， Ọ dị fechaa ma fechaa, nke pụtara na ị nwere ike iburu ya dị ka ihe mberede mgbe ị na-eme njem na gburugburu mmiri mmiri - ọ zoro na akpa aka ekpe gị, yabụ ị nwere ike ịgụnye ya na ngwa ahụ.
2, Bara uru imewe nkọwa na-agụnye kemeghi, okpu agha dakọtara hundu na a n'ogige atụrụ ala cover, dum a-obi n'akpa uwe na ihe ime windbreak.
3, The ákwà onwe ya nwere ike n'ụzọ dị irè windproof na nwere ike imewe ọrụ. Na-agbanwe n’egwe na cuffs, n’akpa uwe, uwe mpe mpe akwa, akpa aka zippered (maka ikuku ikuku) na zippers maka uchi di mfe. Okpukpo onu ahu di nma nke ukwu ma nwegharia ya na olu
Onye ahịa anyị gụnyere ọtụtụ ika ụwa. Fọdụ enweela mmekọrịta anyị na 5-8 afọ.
2.We nwere Ndị Azụ Ahịa 2: Textiles, uwe. Ahịa ọ bụla nwere ahụmahụ ọrụ afọ 8. Anyị nwere ike na-enye gị Onye-nkwụsị ọrụ niile na ngwaahịa. Ezigbo ndị otu na-emekọrịta ihe nwere ike ikwe nkwa ịzaghachi ụdị nyocha niile n'ime awa abụọ. Omenala ahịa anyị na-aga n’ihu na ọrụ otu.
Anyị nwere nchịkwa siri ike na njikwa njikọta ọkọnọ. Anyị nwere ụlọ ọrụ nke anyị, awa abụọ abụọ pụọ na lianyungang. Anyị na-ahazi akwa / ihe, dịka anyị na-achịkwa ya n’aka yarn ruo dai ruo wee mee; Anyị na-enyefe ngụkọta ọrụ sitere na imewe / sere, na mbụ ụdị, ụdị ikpeazụ, ụdịPPP, mepụta ọtụtụ, rue nyocha nke mbu.
Nke gara aga: ndị ikom Yoga Uwe Tummy Control High Waisted Workout Yoga Leggings
Osote: Jaketị ọkụ na-acha ọkụ na-akwado ịzụrụ buru ibu